Wararkii Ugu Denbeeyay Ee Corona-virus Ee Caalamka. AwdalMedia Awdalmedia Wararkii Ugu Denbeeyay Ee Corona-virus Ee Caalamka.
Raysal wasaare Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay 21 maalmood oo bandoo ah oo ka bilaabanaysa saqda dhexe ee caawa, waxana bandoodan ay saamaynayaa 1.3 billion oo qof oo ku nool Hindia, waana talaabadii u dambaysay ee ay Hindiya doonayso inay ku xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus.
Japan iyo Gudida Caalamiga ah ee Olympic-da Aduunka ayaa ku heshiiyay in ciyaarahii Olympic-da 2020 ee Tokyo lagu qabanayay dib loo dhigo mudo sanad ah, waxana ay tan la micno tahay in la aqbalay dalabkii ka yimid dalal badan oo caalamka ah oo ka dareen celiyay culayska iyo khatarta coronavirus.
Spain waxa la soo sheegayaa dhimasho ah 514 qof oo u geeriyooday coronavirus maalin gudaheed, waxana ay tani ka dhigaysaa dhimashada dadka reer Spain ee u geeriyooday xanuunkan 2,696, sidoo kalena waxa la wariyay inay jiraan 6,600 kiis oo cusub oo xanuunkan ah, taas oo ka dhigaysa dadka uu haleelay caabiqan covid-19 ee Spain ku nool 39,673.
Guud ahaan caalamka ilaa hada 17,100 qof ayaa u geeriyooday COVID-19 waxana ay xogta ay ururisay jaamacada Johns Hopkins University ee Maraykanku ay sheegaysaa in kaliya 103,000 qof oo ka mid ah 392,000 oo caabuqan laga helay ay bogsadeen.